Induction Inopera Fitting-Heating Treatment Machinery
musha / Applications / Shrink Fitting / Induction Dzora Zvakakodzera
Category: Shrink Fitting Tags: induction, induction kupisa kuderera, Induction inopera fitting, induction shrink yakakodzera muchina, induction kuderera kupisa, RF inodzvinyirira yakakodzera muchina, shrink yakakodzera system
Induction inopera fitting inoreva kushandiswa kwekombiyuta inopisa inotyisa kupisa kushandisa midziyo yesimbi pakati pe 150 ° C (302 ° F) uye 300 ° C (572 ° F) nokudaro zvichiita kuti vandire uye vobvumira kuiswa kana kubviswa kweimwe chikamu. Kazhinji kutsetseka kwemaodzanyemba kunoshandiswa pane zvishandisi zvakadai sealuminium uye yakakwirira kunoshandiswa pane zvishandisi zvakadai sepasi / pakati pekubata carbon. Iyo nzira inodzivisa kuchinja kwema mechanical properties apo ichibvumira kuti zvinhu zviitwe. Metare kazhinji anowedzera mukupindura kune kupisa uye chibvumirano pamusoro pekukonzera; mhinduro iyi inoshandiswa pakuchinja kwekushisa inoratidzirwa seyeseji yekuwedzera kupisa.
Induction Kutya iyo isiri iyo yekukurukura inotungisa nzira iyo inoshandisa mutemo we electricmagnetic induction kuburitsa kupisa mune chebasa-chidimbu. Muchiitiko ichi kuwedzera kwekushisa kunoshandiswa mune yekushandisa michina kuti ikwane zvikamu pamusoro peimwe, semuenzaniso bushing inogona kuiswa pamusoro pemubato nekuita dhayamita yayo yemukati ive diki zvishoma kupfuura dhayamita yemubato, wozoipisa kusvikira yasvika pamusoro pemubato. , uye kuibvumira kuti itonhorere mushure mekunge yadhonzwa pamusoro pesimbi, nekudaro ichiwana 'kudzikira kukwana'. Nekuisa zvinhu zvinodzora kuita zvine simba zvinachinjana magineti, magetsi azvino anogona kuitwa kuti ayerere musimbi nokudaro achigadzira kupisa nekuda kweI2R kurasikirwa mumashoko acho. Ikozvino inokonzerwa inoyerera inowanikwa zvikuru pamusoro penzvimbo yakasara. Ukuru hwehutatu hunotarirwa nehuwandu hwemunda unoshandiswa uye kushandiswa kwezvinyorwa. Kupisa kwemazuva ekuputika kwekucheka kunowira muzvikamu zviviri zvakakura:
Mains frequency units anoshandisa magnetic cores (iron)
· Solid state (electronics) MF uye RF Induction Heaters